Akụkọ - Huyssen's waterproof power on PFC dị elu
Huyssen's waterproof eweta na PFC dị elu
Huyssen's PFC ọkụ anaghị egbochi mmiri gụnyere ike sitere na 150 Watt ruo 600W. Voltage mmepụta nwere ike ịbụ 5V,12V,24V,30V,36V,48V, wdg. A na-akwakọba ya na nke siri ike, enweghị mmiri, ihe mkpuchi uzuzu, ihe mkpuchi aluminom nke IP67 kwadoro. Ntinye na mmepụta bụ site na eriri eriri ejiri akara, njikọ okirikiri ma ọ bụ njikọ omenala. Bọọdụ ndị dị n'ime ahụ bụ nke gbajiri agbaji ma kpuchie ya maka ihe mgbochi na oke ujo na ịma jijiji.
Ntu oyi bụ site n'ime ime na mgbidi nke ihe mkpuchi IP67 nwere ọkwa yana site na baseplate gaa na chassis dị n'èzí ma ọ bụ mgbidi ụlọ, yana convection ọzọ site na elu dị n'èzí. Ọ bụrụ na etinyere n'elu ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a na-emewanye ka ọ dị jụụ na ndị ntụgharị na-enweta ike mmepụta dị elu. Ọkụ ọkụ ndị ahụ nwere ọnụ ụlọ ime ụlọ na-emesapụ aka ma kwado ya maka ịrụ ọrụ karịa -25ºC ruo 50ºC na-enweghị ogo.
Igwe ọkụ eletrik dị mma maka ịrụ ọrụ na njem ụgbọ njem, ụlọ ọrụ dị arọ, ọkụ ọkụ LED, Ngwuputa, ndị agha, mmiri na ngwa telecom ebe nchebe site na ntinye mmiri site na jets dị ike, ájá, ájá ígwè, mmanụ na ihe ndị ọzọ na-emerụ emerụ chọrọ. atụmatụ dị ka n'okpuru:
Voltaji ntinye arụ ọrụ: AC110/220V,50/60HZ
Voltage mmepụta: 48V
Mmepụta ugbu a: 20.8A
Ike mmepụta: 500W
Ogo nke enweghị mmiri: IP67
Nchedo: Mkpirisi sekit / ibufe / n'elu voltaji / n'elu okpomọkụ;
Nhazi nke mmiri na-adịghị na ọkwa IP67, imewe maka nrụnye ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí;
100% zuru ibu ọkụ-na ule;
CE RoSH FCC nkwado;
Ngwugwu gụnyere: 1 x 48V 500W Onye na-anya ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ
Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ, Nnweta ike mmemme, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Nkwanye ike Dc, Nweta ike ahaziri ahazi,